FOTODRAFITRASA :: Hohatsaraina ny lalam-pirenena faha-9 sy faha-12A • AoRaha
FOTODRAFITRASA Hohatsaraina ny lalam-pirenena faha-9 sy faha-12A
Hamboarina ny lalam-pirenena faha-9 sy ny ampahany amin’ny lalam-pirenena faha-12A izay hahafahan’i Madagasikara hisokatra amin’ny ranomasimbe Indianina sy ny lakandranon’i Mozambika. Notanterahina, omaly, ny fanaovan-tsonia amin’ity fiaraha-miasa izay notanterahin’ny governe­manta Malagasy sy ny Banky Afrikanina ho an’ny fampandrosoana na ny BAD, maha­kasika izany.
Manodidina ny 156,81 tapitrisa dôlara ity fifanarahana nosoniavina ity ka haharitra dimy taona ny fanatanterahana izany. Hisy ihany koa ny fanamboarana “Corridor” any amin’iny Faritra Atsimo Andrefana iny miaraka amin’ny seranan-tsambon’i Toliara ary ny seranan-tsambon’i Taolagnaro.
“Natao hanatsaranany fotodrafitrasa any atsimo ity fifanaraham-piaraha-miasa ity izay hanamafy ny fifanakalozana misy eo amin’i Madagasikara sy ireo firenena afrikanina hafa. Ity fanam­piana avy amin’ny BAD sy ny mpiara-miasa aminy ity dia hahafahana mamoaka ireo vokatra ara-toekarena misy any amin’ireo faritra efatra any atsimon’ny Nosy”, hoy Andriambolonona Vonintsalama, minisitry ny Vola sy ny fitantanam-bola , omaly nandritra ity fanaovana sonia fiaraha-miasa ity.
Araka ny fanazavana hatrany, hanamarika io fiaraha-miasa io ny fanamo­rana ny fampandrosoana ny lafiny ara-barotra sy ny lafiny toekarena. Hatramin’ny taona 2024, vinavinaina ho telonjato ireo orinasa madinika sy salantsalany hahazo tombontsoa amin’ity tetikasa ity. Olona dimy arivo ihany koa no vinavinaina hahazo fanofanana amin’ny fana­tsarana ny famokarana mba hahafahana mamaly
ny filan’ny tsena iraisam-pirenena.
BEACH SOCCER – «CAN 2018» :: Tafita amin’ny manasa-dalana ny Barean’i Madagasikara